Sababaha Keena Bidaarta - W/Q: Cali Cabdi Coomay - Somaliland Post
Home Maqaallo Sababaha Keena Bidaarta – W/Q: Cali Cabdi Coomay
Sababaha Keena Bidaarta – W/Q: Cali Cabdi Coomay
Hidde amma dhaxal ilaa toddoba fac gaadhaysa. ( Androgentic Alppecia)
Dalka ingiriiska oo laga Bilaabay Daweynta Bidaarta
Shirkad lagu magacaabo Intercytex, xarumona ku leh magaalooyinka Cambridge iyo Manchester ee dalka Britain ayaa horraantii bishan Oktoobar, dawladdu guddoonsiisay deeq lacageed oo dhan £1.85m.
Lacagtaas oo qayb ka ah dadaal lagu hormarinayo wax ka qabashada bidaarta haleeshay malaayiin rag ah, iyo qaar ka mid ah haweenkaba. Shirkaddaas, Intercytex, waxay soo bandhigtay in ay si ashqaraar leh ugu guuleysatay timo u soo bixinta, 5 ka mid ah toddoba rag ah oo ay ku jitaabisay farsamo cusub oo timo loogu soo bixinayo rag madaxoodu hoolan yahay, bidaar darteed. Waxayna jitaabo hadda ku hayaan 20 nin oo kale. Wixii ka dambeeyana loo soo gudbi doonaa in ay si ganacsi ugu baahdo dalkan ingiriiska iyo dunida kaleba.
Qaabkan oo ah mid aan hore loo adeegsan, waxay sheegeen in bidaar oo dhan, tan ugu xun, lafteeda ay muddo seddex sano ah xal ugu helyaan. Saynisyahanada arrintan gacanta ku haya, waxay sheegeen inay adeegsanayaan qalab beera timaha, iyada oo marka hore, timo laga soo jarayo Qadaadka qofka bidaarka qaba, ka dibna ‘qalabku’ baadhis iyo abuurid ku samaynayo.
Halkaas oo dib loogu beerayo madaxa bidaartu haleeshay, iyadoo irbad aad u dhuuban lagula mudayo maqaarka hoose ee halka bidaartu leeftay, qadar aan ka badnayn nusa saacna lagaga dhigayo madaxaas mid ay dib timo uga soo baxaan. Waxaa la filayaa in qaabkani horseed u noqdo in Aw-bidaareyaal badan oo madaxoodu hoolan yahay, sida kan warbixintan qoray, in ay wakhti aan fogayn madaxoodu dib timo u yeesho.
Fiitamiin B, Fiitamiino isku jira (Multi-Vitamin), macdanaha, Iron, Calcuim, Zinc, whole Grain, Fiitamiin D, Fiitamiin B 12.